Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguShirley
Le yi bach yabalobi, (3 bedrooms) ibekwe ekupheleni kwesitrato esincinci esizolileyo. ILake Taupo kukuhamba kwemizuzu eli-10 kwaye uMlambo iTauranga Taupo umgama wokujula. I-bach ixhotyiswe ngokufanelekileyo, kodwa IINDLEKILE KUFUNEKA ZIZINIKE I-LINEN YEBHEDE, iitawuli, ukutya njl, kunye ne-COCILE ngaphambi kokuba zihambe. Akukho wifi.
Ukuba awukwazi ukucoca indlu phambi kokuba uhambe okanye unikezele ngelinen yakho, kungcono ukuba ufumane imotel okanye ihotele ekufutshane. Sizama ukugcina ixabiso lisezantsi ngokungabi nantlawulo yokucoca.
$20 ngomntu owongezelelweyo.
Indlu isekupheleni kwesitrato esifutshane esithuleyo esinamakhaya amaninzi eeholide. Ikufuphi nomlambo, ichibi kunye nemveli ethile yokubuyisela, kufutshane. Kusenokwenzeka ukuba unentloko ezimhlophe (Popokatea), Kereru, Ruru kunye nenkitha yezinye iintaka zomthonyama ezijikeleze indlu.
Ndihlala ezantsi nje kwendlela ngoko ke ndiya kukufumana.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tauranga Taupo